Ncell को Non-stop TikTok अफर: कसरी किन्ने यो प्याकेज अनि कति पर्छ यसको शुल्क ?
निजि क्षेत्रको अग्रणी टेलिकम कम्पनि Ncell ले आफ्नो ग्रहाकहरुलाई आकर्षण इन्टरनेट प्याकेजहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा अन्तर्गत बिसेस गरि टिकटक मात्र अनलिमिटेड प्रयोग गर्न मिल्ने खालको Non-stop TikTok अफर आफ्नो ग्रहाकहरु माझ ल्याउएको छ।
के हो Non Stop TikTok Offers ?
Ncell को आफ्नो करोडौ ग्राहकहरुलाई अनलिमिटेड TikTok चलाउन मिल्ने खालको इन्टरनेट प्याकेज हो यो। ग्राहकले यस प्याकेजबाट TikTok अनलिमिटेड चलाउन सकिन्छ, डाटा सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता हुदैन। १ दिन, ७ दिन र ३० दिनको प्याकेजमा उपलब्ध भएको यो अफर, ग्राहकले आफ्नो इच्छा अनुसार लिन सकिन्छ। १ दिनको प्याकेजको रु. ३१.९२, ७ दिनको प्याकेजको रु. १२७.६९ र ३० दिन प्याकेजको रु. ४५९.६८ पर्छ।
७ दिन र ३० दिनको प्याकेजमा अनलिमिटेड TikTok को अतिरिक्त क्रमस 4GB र 6GB डाटा पाउन सकिन्छ तर १ दिने प्याकेजमा भने अतिरिक्त इन्टरनेट सुबिधा उपलब्ध छैन।Ncell Non Stop TikTok Offer
Validity कर बिनाको मूल्य (Rs.) कर सहितको मूल्य (Rs.) फेसबुकको प्रयोग अतिरिक्त डाटा
१ दिन २५ ३१.९२ ग्राहकले जति सकिन्छ N/A
७ दिन १०० १२७.६९ ग्राहकले जति सकिन्छ 4GB
३० दिन ३६० ४५९.६८ ग्राहकले जति सकिन्छ 6GB
कसरी लिने Non Stop TikTok प्याकेज ?
यो प्याकेज लिनको लागी तपाइले esewa, khalti etc. जस्तो एपबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पनि यो इन्टरनेट प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले *17123# डायल गरेर यो इन्टरनेट प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ।
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले थ्रीजीबाट फोरजी मा सिम अपग्रेड गर्ने ग्राहकका लागि मंगलबार (माघ ०६) आकर्षक बोनस योजना ल्याएको...
के उच्च गतिको इन्टरनेट र अटुट कनेक्सन सम्भब छ त ? बिल्कुलै सम्भब छ। एनसेलको एनसेल बिज फाइबर ब्रोडब्याण्डले यो...
एनसेलको नेटवर्क भएको ठाउमा जुनसुकै बेलामा इन्टरनेट चलाउन पाउनु खुसीको कुरा हो। एनसेलको बिजनेस पकेट वाइफाई प्याकेज मार्फत अब झन...
Ncell को ७ दिनको लागी रु. २५.५४ मै 3500MB TikTok डाटा प्याक: कसरी किन्ने ?
एनसेलले आफ्नो ग्रहाकहरुको खुसीको लागी अत्यन्तै सस्तो मुल्यमा फेसबुक प्याकेज ल्याएको छ। यदि तपाई Ncell को ग्राहक हुनुहुन्छ भने तपाईले...
Ncell: Non-stop Facebook + YouTube इन्टरनेट प्याकेज: कसरि लिने र शुल्क कति पर्छ ?
Ncell को जति धेरै इन्टरनेट चलायो त्यति नै धेरै सस्तो अफर
Ncell All Time Data Packs: मूल्य सूची सहित
वर्ल्डलिङ्क वेबसर्फर ब्रोडलिङ्क डीसहोम क्लासिक टेक नेपाल टेलिकम भायनेट सुबिसु एनसेल